साहित्य Archives - Khula Patra
- सुदिप राई यो धर्तिको गर्भमा एउटा सपनाको गर्भधारण हुनेछ र उसले हामिलाइ थमाइदिनेछ सपनाको एउटा राँको अनि त्यही राँको बोकेर दौडनेछौ हामी पहाड, खोला, साँघुरो गल्ली र राजमार्गहरु गाउनेछौँ खुल्ला आकास, प्यारो धर्ती र मायालु बतासको गीतहरु ! खुशीले रुदै जोड जोडले बोल्नेछौ स्वतन्त्रताक...
काठमाडौँ । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरको कविता संग्रह ‘मृत्युसँगको साक्षात्कार’ विमोचन भएको छ । शुक्रबार भक्तपुरको कौशलटारस्थित ह्वाइट प्यालेस बैंक्वेटमा एक समारोहका बीच कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री डा.शशाङ्क कोइराला र नेताहरु अर्जुननरसि...
गीता मिजार, हरेक कालो बादलमा चाँदीको बाला भेटिन्छ । पानीको थोपा थोपामा आगोको ज्वाला भेटिन्छ । यस्तो देशको नागरिक हुँ, गर्वले छाती फुल्छ, नेपाली रगतको स्वरोजगारका माला भेटिन्छ । पराईको भुमिमा बलिदान कति र कहिलेसम्म, यतै खोजौ भविष्यको उज्यालो पाला भेटिन्छ । बुझ्नुस डलर जिन...
- लक्ष्मीनारायण मिश्र, च्यान्टीले खोजेको जामा बजारमा भेटिनन् रे । गाँउकी भुन्टीले दशैमा नयाँ नाना किनिनन् अरे । यो दशैंमा प्याकुली काकी माइती गइनछिन् । जन्तरे बाँ ले आशिष पनि फोनैबाट दिए अरे ।१। पारी गाँउमा कालेको खसी बिकेन अरे । यो दशैंमा भुण्टेले पनि घरमा खसी काटेन छ । च्यान्टेको फर्ममा...
- मित्र परियार असोज महिना छिप्पिँदै गयो झरी बादल, हिलो मैलो साम्य भयो। सबै भन्छन्– आहा, दसैं आयो! मेरो जीवनमा चैं असार सुरू भयो! गाउँका ठिटाहरूको मुखै रसाउने गरी तरुनीहरूको बढ्दो छाती र कम्मर नाप्छु। सबको लम्बाइ र चौडाइ हिसाब राख्छु। थाकेको ज्यानले थोत्रो मेसिनमा दिनरात सबको दसैं सि...
- लक्ष्मीनारायण मिश्र स्वागत् छ दिवसमा सुधार भएर आउनु । मन मुटु सुधारेर सोच शुद्ध गरी आउनु । नेतृत्वको सोचाइमा जगाउ नव श्रृजना । सुशासन चलाउनु सुधारी नव योजना ।। दिमागबाटै हटोस भ्रष्टचार घुसखोरी । सोचबाटै घटाएर नातावाद गर्ने बानी । बोलेको बचन सम्झी पालन गर्न आउनु । जनता संगै रमाई विश्व...
कविता : किस्ता जीन्दगीको ….
- दिपक लिम्बू, घरि घरि अलमल छ, फेरि निरन्तर नै चल्छ सँधै उस्तै व्यस्तता छ, चुकाउनु छ धितो आफ्नै जीन्दगीको ! तिरिरहनु छ किस्ता आफ्नै जीन्दगीको .... न बर्ग विभेद ! समान छ नीति, थोरै घटी बढीमात्रै हो । न ब्याज मिनाहा हुन्छ, नत सावाँ समय बिपरित चल्दैछ । तैपनि तिर्नै छ कि...
कविता : ‘धन्यबाद’
- लक्ष्मीनारायण मिश्र हाम्रो समस्या त दैनिक चुलो वाल्नमा थियो धन्य छ सरकार ! सिंगो घर नै बालिदियौ । यसरी नै गरीबका सवै झुपडि बालिदिनु । किनकी भूमीहिनहरुको अन्त पनि गर्नुछ । हाम्रो समस्या त गरिवी संग लड्नु थियो । तर तिमीले व्यवसाय नै बन्द गरिदियौ । धन्य छ कोरनाको कहरमा यो अभ्यासलाई, य...
कविता : कस्ताे जमाना आयाे
– किशोरचन्द्र दुलाल, नदेखिने दुष्मन व्याप्त बन्दै लग्याे मनुष्य वहुतै लाखलाख गन्दै । अदृष्य भई सहजै उ त घुम्ने पारा पा-याे वसैमा याे व्रम्हाण्ड सारा ।। लग्याे वालवच्चा अनि वुवा आमा लायाे कुदृष्टि ती बुढाबुढीमा । सकस् बनायाे दीर्घ राेगी सबलाई छाेडेन हृष्टपुष्ट ती युवा कसैलाई...
फूलको थुँगा बगेर गयो गंगाको पानीमा कहिले भेट होला नि बरै यो जिन्दगानीमा... राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले लेखेको यो गीत उनकी धर्मपत्नी महाकाली घिमिरेको जीवनमा मेल खान गएको छ । घिमिरेले कुन परिवेशमा, कुन अवस्थामा र कुन मनस्थितिमा लेखेका थिए, अब कसैले भन्न सक्दैन । तर, यही गीतले महाकाली घिमिरेको ज...
कविता : ‘हाम्रा बा’
- लक्ष्मीनारायण मिश्र, हाम्रा ‘बा’हरु करुणाका खानी छन् । रिसाहा र स्वाभिमानी पनि छन् । दया र ममताका खानी पनि हुन् । मेरा बा गाउँका अगुवा पनि छन् ।। बेसहाराहरुलाई, साहारा दिने बा । निमुखाहरुलाई, भरोसा दिने बा । अभिमानीहरुका, स्वाभिमानी बा । घमण्डीहरुका, आज्ञाकारी हुन् बा ।। अहित ...
कविता: छिमेकी बा… र सुर्ती
- लक्ष्मी प्रसाद चँम्लागाई त्यो सानो झुपडी अनि पिल पिल मधुरो बत्ती अँध्यारो कुना भित्र ठुलो बटुकामा कालो चिया अनि छिमेकी बा….. र सुर्ती बिहानको त्यो मिरमिरे उज्यालो अनि हातमा खिया परेको कच्या र आधा फाटेको डोको अनि छिमेकी बा….. र सुर्ती खाली खुट्टाले भन्दै थियो अब त थ...
कविता : परिक्षा
- लक्ष्मीनारायण मिश्र परीक्षा पतिको हुन्छ, घरमा पत्नि नहुँदा । पत्निको परीक्षा हुन्छ, पतिको गरिबी छदा ।। वुवाको परीक्षा हुन्छ, छोराछोरी भएपछि । परीक्षा आमाको हुन्छ, सन्तान टाढिए पछि ।।१।। परीक्षा छोराको हुन्छ, विहे उस्को भए पछि । छोरीको परीक्षा हुन्छ, जवानीमा चढे पछि ।। परीक्षा दा...
वीपी साहित्य सम्मान ज्ञानमणि नेपाललाई, सेनानी सम्मान होमनाथ दाहाललाई प्रदान गरिने
काठमाडौँ । यसवर्षको बी.पी. साहित्य सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार ज्ञानमणि नेपाललाई प्रदान गरिने भएको छ । जननायक बी.पी कोइराला स्मृति ट्रष्टले हरेक वर्ष बीपी जयन्तीको अवसरमा वितरण गर्दै आएको सो सम्मान यसवर्ष साहित्यकार नेपाललाई प्रदान गर्ने निणर्य गरेको हो । यस्तै, बीपी सेनानी पुरस्कार प्रजा...
कविता : जनै पूर्णिमा
संस्कार पुर्र्वीय शुभ कर्म गर्दै । वैद्धिक विधिले जनै मन्त्रण् गर्दै । धारण पुरुष, तागाधारी गर्छन् । जनै पुर्णिमामा नयाँ जनै फेछन् ।।१।। धारा, नदी तल्मा नुहाइ सफा भै । जनै लगाइ शुभाशुभ् कर्म गर्दै । गणस्नान गर्ने श्राबण् पूर्णिमामा । छ शक्ति साधना गायत्री मन्त्रमा ।।२।। गहूँत, गोबर, माटो...
कविता : लड्न त लडेको थिएँ
- दिपक लिम्बु लड्न त लडेको थिएँ हातमा राइफल र गोली बारुद बोकेर देशको मुहार फेर्छु भनी । तर मलाइ के थाहा ? म आफै अपाङ्ग हुनलाई लड्दै छु भनेर ।। लड्न त लडेको थिएँ नि, देश बनाउँछु भनेर ! तर मलाइ के थाहा ? म आफै अपाङ्ग हुनलाइ लड्दैछु भनेर ।। यो देशले छुट्टै निकाश पाउँछ अनि समृद्धिको मुहार फे...
कविता : ‘दिनचर्या’
- लक्ष्मीनारायण मिश्र मलाई आजकाल गाँउमा नखोज्नु, सहरको रमझम तिरै रमाएको छु । म पाठशाला र बैठकहरुमा भेटिन्नँ, भट्टि र बारको नशामा हराएको छु । त्यसैले त गाँउ आउन लजाएको छु । आचकाल मेरा दिनचर्याहरु नसोध्नु, सपना सकिएको निन्द्रा जस्तै चन्चले छ । भेल पछिको सुख्खा बगर झैँ पिल्सिएको छ । बगरको बा...
- लक्ष्मीनारायण मिश्र कोरनाको कहर बढ्दो थियो । विश्वलाई आतङ्कित बनाउदै थियो । विज्ञानलाई निस्तेज गराउदैछ । बैज्ञानिकलाई लोलाउने बनाउँदै छ । भाइरसले साम्राज्य फैलाउदै छ । एकछत्र पृथ्वीमा राज गर्दै र भन्दैछ । हे मानबहरु प्रकृतिको वलात्कार नगर । आजकाल आफन्तमा आवतजावत बन्द छन्...
गजल : जयकुमार विक
- जयकुमार विक जीवन रहरै रहरमा जिएको छ । फाटेको मन कसले सिएको छ । अलिकति खुराक नपुगेर क्यार, उसले चुस्स सोमरस पिएको छ। सरसापट ऐचोपैंचो चलाउनु पर्छ, बद्लामा दुगुणा दशधुर लिएको छ। मन हलुङ्गे होर पगालिनु हजुर हेर भित्रभित्रै पाकेर खिएको छ। - तेह्रथुम ।
कविता : ‘ठग्ने सोचहरु भाग्दै छन्’
- लक्ष्मीनारायण मिश्र मेरो मानबता हराएको यो सहरमा, मन र भाबनाहरु गल्दै गएका छन् । साधु र भक्तजन आउने ती मन्दिरहरुमा, भगवान मस्तसँग निदाएका छन् । त्यसैले भएजति मन्दिर सबै बन्द छन् । मन्दिर बन्द छन् र त भगवान निदाएका छन् । त्यसैले मान्छेहरु बाँच्ने याचना गरिरहेछन् । हे ! अस्पतालका ...
कविता : ‘सिंह आतङ्क’
- मनु याक्थुङबा तिनिहरुको चिप्लो कुरा तिनिहरुको काइते कुरा सुन्दै आएको हो हो आएकै हो सुन्दै —विनम्र विन्ति —बिनम्रा बाचा —बिनम्र सम्बोधन अझ त्यसमाथी समाबेशी सम्बोधन —नमस्कार —सेवारो —फ्याफुल्ला —तासीदेले —झोर्ले —तारेमाम र हामीले पनि गरेकै हो विश्वास विश्वास गरेकै हो हा...
कवि लक्ष्मीनारायण मिश्रको कविताः ‘मानव स्वास्थ्य’
- लक्ष्मीनारायण मिश्र हामीले पढेको राजनीति शास्त्र । शासन उत्कृष्ट हुन्छ लोकतन्त्र । भनेर सिकायौ, पढायौं जनमा । शासन विधि त दुइटा विश्वमा । शासन दुइटा विधिले चल्दछ । एउटा नीतिले नियमित् चाल्छ । शुसासन हुन्छ सन्तुष्टै रहन्छ । नागरिक् गरिमा उचाइमा हुन्छ । दोस्रो त ने...
कविता : ‘आतङ्ककारी’
-मनु याक्थुङबा माङ्गेन्ना ढलेर उ पारिबाट पोक्लाबाङ यकले मलाई हेरिरहेको छ म वारी मेयङलुङ बसेर फगत निरिह र निशस्त्र भएर रमिता हेरीरहेको छु आफ्नै सन्तान कपुत भएपछि आफ्नै सन्तान कुलाङगार भएपछि अरु सत्रु किन चाहिन्छ र ? आफ्नै सन्तान दलाल भएर जन्म दिने आमा बेचेपछि । ...
कविता : ओ सुर्यबहादुर !
- सेन्छेलुङ पतङ्वा लिम्बु ओ सुर्यबहादुर ! घरमा सुत्नुपर्ने मान्छे काँ याँ खुला आकाशमा सुतिबसेको हो ? बेला भो अब जाऔँ हिड । हजुर हावा मात्र खाएको भरमा दशदिन त उभिहिडेँको हुँ यताउती गरेर थोपोले आँत भिजाइहिडेँको हुँ हिजो कसो झ्याप्प निदाएछु हजुरले भनेपछि पो थ...
कोही किन अनायासै आइदिन्छ जिन्दगीमा ?
- रोमन आचार्य जब ताराहरु आकाशमा चम्किन्छन् अनि मलाई तिमीसँगै खाएको मः मः को सेतो डल्ला उस्तै लाग्छ अँ साँच्चै ! तारा र मः मः को डल्लाबीच सम्बन्ध नि? एक अनुत्तरीत प्रश्न हुनेछ त्यस्तै अर्को प्रश्न कोही किन अनायासै आइदिन्छ जिन्दगीमा......... सुस्तरी वहेको हावाको झोकाले स्पर्श गर...
चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षका लागि १० जनाको आवेदन
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डको रिक्त रहेको अध्यक्षका लागि १० जनाको आवेदन परेको छ । बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष केशव भट्टराईको मंसिर २९ मा निधन भएपछि अध्यक्ष पद रिक्त थियो । गत १६ वैशाखबाट ३१ वैशाखसम्मका लागि दर्खास्त आह्वान गरेयता १० जनाले बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका हुन् । आवेदन दिएकाहरूका ल...
कविता : ‘फूलको अवसान’
- पुष्प विश्वकर्मा सदियौँ गाइरहेँ गीत म मानी जनका हितमा, तिम्रा विजयका जुलुसमा, ठानी हितमा मुलुकको बगैँचा सुन्दर यही देश मानी, जनलाई यसका फूल ठानी, बसेँ थेँ मौनता मा........! जब हिर्कायौ आगाका फिल्काहरु, मिल्कायौ आशाका झिल्काहरु, न्याय, अधिकार समानताका खन्याई छर्राहरु बगैँचा ...
कविता : उनको सम्झनामा……
- रोमन आचार्य रातको निस्पट्ट अँध्यारोमा जब खुल्दछन् आँखाहरु अनी सताउँछ तिम्रा यादहरुले कहिलेकाहीँ तिम्रो नाममा, भावनाको डुंगा चढेर पुग्दछु टाढा टाढा सपनाका बस्तीहरुमा...... वादल मडारिएर जब आकाश रिसाउँछ खसेका पानीका थोपाहरु र चिसो बतासहरु मा...
काठमाडौं । थिएटर मल कीर्तिपुर रङ्गमञ्च र थिएटर सेन्टर फर चिल्ड्रेनले क्वारेन्टाइन अभियान अन्तर्गत बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रम ‘कथा खरर, मन हरर...’ सुरु गर्दैछ । लकडाउनको सुरुवाती १६ दिनसम्म ‘क्वारेन्टाइन अभियान भर्चुल थिएटर फेस्टिभल’ आयोजना गरेको यी नाट्य संस्थाले ‘बालबालिकाहरु पनि देख्न, सुन्न...
स्वरका मात्र सम्राट होइनन् नारायण गोपाल
काठमाडौँ । सडकमा गुड्ने सवारी साधनदेखि तन्नेरीले सुन्ने इयरफोनसम्ममा स्वरसम्राट नारायण गोपाल गुन्जिरहेका हुन्छन् । गीत सुन्दै गर्दा यी सदाबहार सिर्जनाका स्रष्टा कस्ता थिए होलान् ? धेरैले मनमनै आआफ्नै धारणा र काल्पनिक तस्बिर बनाइरहेका पनि हुन सक्छन् । हँसिला, चिटिक्क परेका नारायण गोपाल फेवातालमा ...
पोखरामा लोपोन्मुख बाजा सम्मेलन हुने
काठमाडौँ । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको एवं हिमाली सांस्कृतिक परिवारको सहकार्यमा आयोजनामा पोखरा लोपोन्मुख बाजा सम्मेलन हुने भएको छ । मङ्सिर २० र २१ गते हुने सो सम्मेलनका माध्यमबाट नेपाली लोकबाजा संरक्षणका साथै विकास गर्ने उद्देश्य रहेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । ...
झापाका राम ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को टप-४ मा
काठमाडौँँ । चर्चित रियालिटी सो 'द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–२' मा प्रतियोगी २२ हजारमध्ये सुमधुर स्वरका कारण दर्शक र निर्णायकको मन जित्दै झापाको बिर्तामोडका २३ बर्षिय राम लिम्बु टप-४ मा स्थान बनाउन सफल भएका छन् । उनीसँगै बिकास लिम्बु , आरिफ रौफ र सनीश श्रेष्ठ पनि टप-४ मा पुगेका छन् । उनी हाल झापाली रा...
पहिलो लोकस्टार बनेँ शनी विश्वकर्मा, ५० लाख नगद पुरस्कार
काठमाडौं । नेपालको पहिलो लोकस्टारको उपाधि शनि विश्वकर्माले पाएका छन्। एपीवान टेलीभिजनबाट प्रशारित सर्वाधिक पुरस्कार राशिको रियालिटी शो नेपाल लोकस्टारको उपाधिसँगै उनले ५० लाख नगद पुरस्कार हात जितेका छन्। शुक्रबार भृकुटिमण्डपस्थित खुला मैदानमा आयोजित अन्तिम प्रस्तिस्पर्धामा उनले प्रतिस्पर्धीला...
केकीसँग रिजनको माया पिरती (भिडियोसहित)
काठमाडौं । मेषबहादुर बस्नेतको म्युजिक भिडियो ‘ढुकढुकीमा तिमी छौ र पो माया’ सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा केकी अधिकारी, रिजन थापा र मेषबहादुर बस्नेत लगायतको अभिनय छ । फिल्म निर्देशक यादवकुमार भट्टराईको निर्देशन रहेको भिडियोमा लोमस चापागाईं र मिलन भण्डारीले सहनिर्देशन गरेका छन् । स्वरुपराज आचा...
‘बान्नोमा’ बोलको मार्मिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौँ । सन् ९० को दशकको झझल्को दिने आफ्नो पहिलो म्युजिक भिडियो “ तिम्रो रुपले " बाट सोर्ता र दर्शकको राम्रो प्रतिक्रिया र चर्चा कमाउन सफल गायक सम्राट न्यौपानेले आफ्नो दोस्रो म्युजिक भिडियो “ बान्नोमा " सार्वजनिक गरेका छन । नेपाल आइडल सिजन २ मा टप २० सम्म आफ्नो स्थान बनाउन सफल गायक न्यौपाने...
बिच्च बिच्चमा पछि दुर्गेश थापाको अर्को दमदार गीत ‘बोल्दैन फोटो’माको (भिडियो हेर्नुहोस्)
काठमाडौं । चर्चित मोडल तथा गायक दुर्गेश थापाको अभिनय रहेको नयाँ गीत ‘बोल्दैन फोटो’ बोलको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । लोकप्रिय गायक डेबिड शंकर र भावना आचार्यको स्वरमा सजिएको नयाँ भिडियो ‘बोल्दैन फोटो’को भिडियोमा दुर्गेशसँगै अस्मिता पुरीको दमदार अभिनय रहेको छ । दीपक शर्माको शब्द र संगीत रह...
नेवारी बाजाबाट नेपाल भ्रमण वर्षको तयारी : ‘कुटम्व लाइभ इन भक्तपुर’ विथ इन्दिरा लाछिमस्यू
भक्तपुर । भक्तपुरमा कुटम्व लाइभ इन भक्तपुर विथ इन्दिरा लाछिमस्यू भएको छ । ख्वप संगीत संस्थान र स्वीट्स इभेन्टस प्रालि भक्तपुरको संयुक्त आयोजनामा विहीबार राति कार्यक्रम भएको हो । दसैको शुभकामना कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम भएको हो । परम्परागत नेपाली बाजालाई नयाँं पुस्तालाई उत्साहित गर्न कार्यक्रम ग...
आयो सञ्चारकर्मी गायिका सरिताको ‘मेरो जवानी’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । सञ्चारकर्मी, मोडल एवम् गायिका सरिता भारतीको नयाँ गीत ‘मेरो जवानी...’को भिडियो बुधबार रिलिज गरिएको छ । आधादशक देखि विभिन्न स्टेज कार्यक्रममा अरुको गीत गाउँदै आएकी सरिताको यो पहिलो रेकर्डिङ गीत हो । उनी केही समय यताबाट सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघरमा गायन सिकिरहेकी छिन् । लोक पप शै...
‘ड्रेस टु इम्प्रेसन–२’मा ८० डिजाईनर उत्रँदै
काठमाडौं । काठमाडौंको बागबजार र ललितपुरको कुमारी पार्टीमा रहेको ‘इन्टरनेसनल इन्टिच्युट अफ फेसन एन्ड टेक्नोलोजी’का करिब ८० जना प्रशिक्षार्थी डिजाईनरहरु फेसन डिजाईन प्रतियोगितामा उत्रँदैछन् । आयोजक सँस्था इन्टरनेसनल इन्टिच्युट अफ फेसन एन्ड टेक्नोलोजीले दोश्रो संस्करणको ‘ड्रेस टु इम्प्रेसन–२’ फेसन ड...
बुबाको लोकप्रियता र साम्राज्ञीको क्रेजका चेपमा अंकित
काठमाडौँ । एक जमानाको ‘हिट’ गीत हो, ‘रातो टीका निधारमा टलक्कै टल्कियो...।’ गीतसँगै त्यो बेला फिल्म ‘अल्लारे’ पनि उत्तिकै हिट भयो। २२ वर्षपछि अल्लारेका उनै निर्देशक अशोक शर्मा त्यही फिल्मको शीर्ष गीतमा फिल्म बनाएका छन् ‘रातो टीका निधारमा।’ यही दशैंमा प्रदर्शनको तयारीमा रहेको यो फिल्ममा उनले आफ्...
पाँच अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगितामा नेपाल प्रतिस्पर्धा गर्दै
काठमाडौं । नेपालले पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको छ। यसका लागि नेपाली प्रतियोगिता विभिन्न देश प्रस्थान गर्न लागेका छन्। नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने बेलायतको लन्डनमा हुने मिस वल्ड, फिलिपिन्सको मनिलामा हुने मिस अर्थ, जापानको टोकियोमा हुने मिस ईन्टरनेसलन र प...
उपत्यकाका कलाकारहरुको स्थलगत चित्रकला, ‘मध्यपुरथिमि सिरिज’ सुरु
भक्तपुर । उपत्यकाका कलाकारहरुको सहभागितामा एक वर्षदेखि शुरु भएको शनिबारीय स्थलगत चित्रकला कार्यशालाको ‘मध्यपुरथिमि सिरिज’ शुरु भएको छ । ऐतिहासिक, कला, संस्कृति र शिल्पकारिताको अनुपम क्षेत्र भएकाले यसपटक मध्यपुरथिमि कलाकारको रोजाइमा परेको हो । यहाँ निलवाराही, महालक्ष्मी, कुमारी, सिद्धिगणेश, सिद्...
शिव परियारको ‘मंगली-२’मा सरोज र आश्मा (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । चर्चित गायक शिव परियारको स्वर रहेको गीत ‘भेट हुदाँ’को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतलाई शिव परियारको सफल गीत ‘मंगली’को दोस्रो भाग ‘मंगली २’ को रुपमा लिइएको छ। उक्त गीतमा प्रहाल्द शाहको शब्द रहेको छ भने सोही गीतमा शंकर थापा ‘स्माइल’को सङ्गीत रहेको छ । ‘भेट हुदाँ’ बोलको गीत...
काठमाडौँ । गायक शिव परियारको स्वर रहेको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । बिहिबार युट्युबमार्फत् 'भेट हुदाँ' बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक उक्त गीतलाई शिव परियारको सफल गीत 'मंगली'को दोस्रो भाग 'मंगली २' पनि भनिएको छ । गीतमा प्रहाल्द शाहको शब्द तथा शंकर थापा 'स्माइल'को संगीत रहेको छ । गीत...
काठमाडौँ । सप्तरङ्ग’ कार्यक्रमको दोश्रो चरण प्रारम्भ हुने भएको छ । नोभेम्बर दोस्रो साताबाट सातै प्रदेशमा सुरु हुने कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको आयोजक गृष्मा ब्रोर्डकास्टिङले जानकारी दिएको छ । गत वर्ष सातै प्रदेशमा पहिलो चरणको कार्यक्रममा सम्पन्न भएको थियो । पहिलो सिजनमा सद्भाव र ऐक्यवद्...
४४ वर्षपछि डेजीकाे गीत ‘भैंसी लड्याे है माया…’ उनकै छाेरीले गाउँदा…
काठमाडौँ । ‘सङ्गीत मेरो अक्सिजन हो’, सङ्गीतप्रतिको सामिप्यता र सद्‍भाव ओकल्दै जब बिमोचना लम्जेल ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को स्टेज उक्लिइन्, कसैलाई पनि उनी नेपाली सङ्गीतकी ‘लिजेन्ड’ डेजी बराईलीकी छोरी हुन् भन्‍ने आभाषसम्म थिएन। तर, जब उनले आफू गायिका आमा डेजी बराइली र सङ्गीतकार बाबु चन्दन लोम्जेलका स...
काठमाडौं । गायक युवराज कार्कीको नयाँ गीत ‘पिलाएपछि’ सार्वजनिक भएको छ। गीतमा ‘बोल माया’ र ‘गलबन्दी’जस्ता गीतमा अभिनय गरेर चर्चा कमाएकी मोडल अन्जली अधिकारीले कम्मर मर्काएकी छिन् । युवराजकै शब्द र संगीत रहेको गीतको भिडियोमा अन्जलीसँगै कमल, साया, प्रिन्स लगायत फिचर्ड छन्। विशाल निरौलाले एरेन्ज गरेक...
ललितपुर । ललितपुरस्थित कुमारीपाटीमा नयाँ बुटिक ‘त्रिदेवी फेसन हाउस’ सञ्चालनमा आएको छ । राजधानीमा बुटिकको क्रेज बढ्दै गइरहेका बेला बुधबारदेखि ‘त्रिदेवी फेसन हाउस’ थपिएको हो । फेसन डिजाइनरत्रय दिलमाया मगर, दीपा केसी र संगी आचार्यले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त फेसन हाउसको बुधबार एक समारोहबीच पुर्वमिस नेप...
शिवम्को ट्रेलर आयो, असोज १७ गतेदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा (भिडियो सहित)
काठमाडौं । यही असोज १७ गतेदेखि अल नेपाल रिलिजको तयारीमा रहेको चलचित्र शिवम् को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । राजु गिरीले पछिल्लो पटक निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रको ट्रेलर हाईलाईट्स नेपाल मार्फत सार्वजनिक भएको हो । एक्सनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर बनाइएको उक्त चलचित्र टे्रलर हेर्दा मिलन बिछोड तथा रोमान्स...
बल बहादुरले गीत गाएर मन जित्दा भ्वाइसको मंचमा प्रमोदले खोले कपाल (भिडियो)
काठमाडौँ । नेपाली संगीत आकाशको गायन बिधामा अन्तराष्ट्रिय फ्रेन्चाईज शो भित्रिएपछि संगीतमा नया छलाङ मारेको बुझ्न सकिन्छ । नया प्रतिभालाई मात्र हैन गायिकीमा भिजिरहेकाहरुको लागि पनि गायन कला प्रदर्शन गर्ने एउटा गतिलो प्लेटफर्म भएको छ । यस्तैमा पर्छन गायक 'बल बहादुर राजबंशी' । उनले हाल प्रसारण भैरहेको...
काठमाडौँ । नेपाल आइडल सिजन– २ का विजेता रवि ओडको नयाँ गीत ' पिलाएर नशा' सार्वजनिक गरिएको छ । रविले गाएको यो गीतलाई गायक अर्जुन पौडेलले लेखेका हुन् साथै गीतमा उनकै संगीत रहेको छ । केही समय अघी मात्र रिलिज भएको पौडेलको गीत ''बबाल'' ले छोटो समयमै चर्चा कमाइरहेको छ। भिडियोमा चर्चित मोडल अनि नय...
काठमाडाैँ । नेपाली कथानक चलचित्र ‘बाग्मती कि रानी’ निर्माण हुन भएको छ । हिजो काठमान्डाँैको गौरिघाट ए वान क्याफेमा ‘बाग्मतीकी रानी ‘ नामक चलचित्रको नाम घोषणा गरिएको हो । घोषण कार्यक्रममा बरिष्ट चलचित्र कर्मी तथा चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेको उपस्थित रहेको थियो । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदैँ घि...
काठमाडौं । पछिल्लो समयका जोसिला गायक नारायण थापाको स्वरमा नयाँ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । मिलन पछिको बिछोडमा पनि आफ्नी मायालुलाई पुन भेट्ने आशा बोकेको भावमा "कुनै दिन त भेट होला" बोलको गीतको मार्मिक भिडियो सार्वजनिक भएको हो । आधुनिक युवा युवतीमा पहिले माया अनि पछि हुने धोकाधडीको वास्तविक क...
सोभितको ‘कुल खानदान’ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौ । निर्देशक सोभित बस्नेतको पारिवारिक टेलिसिरियल ‘कुल खानदान’ को ट्रेलर सार्वजनीक भएको छ । रमाइलो टिभीको प्रस्तुति रहेको सिरियल दशैदेखि प्रशारण हुने निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिएका छन् । पारिवारिक जीवनको आरोहअबरोह प्रस्तुत गरिने ‘कुल खानदान’ मा नीर शाह,सपना श्रेष्ठ,उत्तम केसी, रोहित रुम्वा,...
मेलिनाको स्वरमा “लै बरी लै” (भिडियोसहित)
काठमाडौं । लोकप्रिय गायिका मेलिना राई र मबिन्द्र राईको “लै बरी लै” बोलको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । मायालु हाँसेर बोल्दा मन चङ्गा हुने कुरा गरिएको उक्त गीतमा मायालुको इशारा बुझन आग्रह गरिएको छ । उक्त गीतमा मबिन्द्र राईको शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा दिनेश श्रेष्ठको एरेंज रहेको छ । उक्त ग...
काठमाडौँ । यसवर्षको छायाँछवि नारी पत्रकारिता पुरस्कार शारदा थापालाई प्रदान गरिने भएको छ । विहीबार विशेष कार्यक्रमका बीच सो अवार्ड प्रदान गरिने कार्यक्रम छ । हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृती आफ्नै चाडपर्वको सम्मान, मौलिक गीत संगीत सम्बृद्धिको हाम्रो यो अभियान भन्ने मूल नाराको साथ छायाँछवि तीज म्यू...
अहिलेकी नेपाली गीतसंगीतकी चर्चित र निकै ब्यस्त गायिका हुन् मेलिना राई । मेलिनाले दिनमा पाँचवटा सम्म गीत रेकर्ड पनि गराउँछिन् । पछिल्लोे साताका दिनहरुमा पनि कम्तीमा दुईवटा गीत रेकर्ड भइरहेको हुन्छ । आफूले स्वर दिएका गीतहरुमा ‘लिप्सिङ’पनि दिन छायांकनस्थलमा पनि भ्याएसम्म पुग्ने गरेकी हुन्छिन् ।...
उदितनारायणलाई ज्यान मार्ने धम्की आएपछि…
काठमाडौँ । चर्चित गायक उदितनारायण झालाई लक्ष्मण नामका एक अपरिचित व्यक्तिले ज्यान मार्ने धम्की दिँदै फोन गरेपछि गायक झाले प्रहरी गुहारेका छन् । एक महिनादेखि निरन्तर ज्यान मार्ने धम्की आएपछि गायक झाले सुरक्षाको माग गर्दै मुम्बईको अम्बोली प्रहरी विटमा उजुरी दिएका हुन् । उनको घरको सुरक्षाका लागि प्र...
काठमाडौं । लोकप्रिय गायक सुमित खड्का राष्ट्रिय भावका गीतहरुसँगै एकल साँझमा गुन्जिए । शुभकामना मिडिया शोलुसनको आयोजना एवं म्यूजिक खबर र यूनिभर्सल पिस फेडरेशनको सहकार्यमा भएको ‘सुमित खड्का देशको आवाज’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय भावका १५ वटा गीतहरुसँगै खड्काले प्रज्ञा भवनको प्रेक्षालय गुन्जयमान बनाएका थिए...
खगेन्द्र यक्सो र सुनिता सुब्बाको ‘मायाले पर्खि बसेको……’ सार्वजनिक, यस्तो छ टिआर सुब्बाको अभिनय (भिडियोसहित)
तेह्रथुम । लामो समय समयको प्रतिक्षा पछि ख्यातिप्राप्त गायक खगेन्द्र यक्सो र सुनिता सुब्बाको आवाजमा रहेको ‘मायाले पर्खि बसेको’ गित बोलको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘चुङवा दोभन’ ‘भज्याङ चौतारी’ ‘जुनतारा झलल’ जस्ता लोकप्रिय गितमा युगल स्वर पस्किएर लाखौ गित संगित प्रेमीको मनमा बस्न सफल सर्जक द्...
यी हुन् मदन पुरस्कार २०७५ का लागि छनौटमा परेका कृति
बुधबार, आषाढ २५, २०७६
काठमाडौँ । ‘मदन पुरस्कार २०७५’ का लागि सात कृति छनोट भएका छन्। मदन पुरस्कार गुठीले पुरस्कार सार्वजनिक गरेको पुस्तकहरूमा कुमार नगरकोटीको ‘ज्ञ’, छुदेन काविमोको ‘फातसुङ’, योगेश राजको ‘रणहार’, विन्दु शर्माको ‘ओक्कल दोक्कल पिपल पात’, सानु शर्माको ‘एकादेशमा’ रहेकाे छ । महेश थापाको ‘मरीचिका’, र ध्रुव...
सलमानको पारिश्रमिक दुई सय करोड
बिगबोस सिजन १३ सुरु भएको छैन । तर, यसको चर्चा सुरु भइसकेको छ । कहिले प्रतिस्पर्धीका कारण त कहिले सलमान खानको पारिश्रमिकका कारण । केही समय पहिले खबर आएको थियो कि सिजन १३ का लागि सलमान खानले चार सय करोड भारु पारिश्रमिक लिइरहेका छन् । तर, यो हल्ला गलत साबित भएको छ । पिंकभिल्लाको रिपोर्टअनुसार सलमान ...
पाँचथर गजल मञ्चमा सुब्बा
पाँचथर । पाँचथर गजल मञ्चको दोस्रो जिल्ला अधिबेशनबाट शन्देस सुब्बाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । समितिको अध्यक्षमा सन्देश सुब्बा, उपाध्यक्षमा पवित्रा प्रयत्न, सचीव जुनु खतिवडा र कोषाध्यक्षमा शंकर आत्मा चयन हुनु भएको छ । समितिको सदस्यमा राज दिलान्जली, धनपती ढुङेल, चन्द्...
शाहिदका यी फिल्म कहिल्यै रिलिज हुने छैनन्
भलै अहिले शाहिद कपुरको फिल्म कबिर सिंहले जबरदस्त कमाइ गरिरहेको छ । रिलिज भएको तेह्रौं दिनमै फिल्मले दुई सय करोडको कोसे ढुंगा पार गरेको छ । फिल्ममा शाहिदको साथमा कियरा अड्वानी रहेकी छन् । बलिउड प्रवेशको डेढ दशकपछि दुई सय करोड क्लबको स्वाद चाखेका शाहिदका यी पाँच फिल्म कहिल्यै रिलिज भएनन् : हीर राम...
विश्वराज पछडङ्ग्या श्यामानन्दसिंह ठकुरीले बनाएका चित्र काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्जलगायत सहरका ठूला होटेलका भित्तामा देख्न सकिन्छ । धेरै सम्भ्रान्त परिवारले घरका भित्तामा झुन्ड्याएका छन् । ती भित्तामा अवधि संस्कृति झल्किरहेका छन् । श्याम भने नेपालगन्जमा रङसँग खेलिरहेका छन् । चित्रकलामा अवधि संस...
रेडियो नेपालमा प्रतिबन्धित त्यो गीत
‘साइँली र माइली पोइला गएछन् गाउँ घर नै शून्य पारेर...’ ३० को दशकमा आएको यो गीतले अत्यधिक चर्चा कमायो । यो लोकभाकासँगै गायक मधु क्षेत्री र उदितनारायण झाको पनि चर्चा चुलियो । यो मधु क्षेत्रीको दोस्रो गीत थियो, जुन गीत रेडियोमा झन्डै २४ वर्ष प्रतिबन्धित भयो । नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको । मधुले ०...
भानु जन्मस्थल चुँदीमा अन्तर्राष्ट्रिय कवि सम्मेलन
काठमाडाैँ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मगाउँ तनहुको चुँदीमा अन्तर्राष्ट्रिय कवि सम्मेलन हुने भएको छ । गीतल प्रतिष्ठान नेपाल तथा नाटक मञ्च तनहुँको आयोजनामा २९ र ३० चैतमा सम्मेलन हुने भएको हो । ‘पर्यटनका लागि साहित्य, साहित्यका लागि पर्यटन’ मूल नाराका साथ सम्मेलन हुने गीतल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष...
पत्रकार टीआर सेनेहाङ चन्दा र शिखाको साथमा फेवातालैमा
तेह्रथुम । गायक समिर सिंगक र मेलिना राईको आवाजमा रहेको “फेवा तालैमा” बोलको गितको म्यूजिक भिडियोको छायाङकन सकिएको छ । चर्चित स्वरकी धनी मेलिना र चौतारे कान्छा उपनामले चिनिएका सदाबहार गायक समिरले केही महिना अघि रेकर्ड गरेको गितको पुर्वी जिल्ला तेह्रथुमको बिभिन्न पर्यटकिय क्षेत्रहरुमा छायाङकन गरिएको ...
कला साहित्य उत्सव भोलिदेखि, यस्तो छ कार्यक्रम तालिका
झापा – शनिबारदेखि झापाको काँकरभिट्टामा कला साहित्य उत्सवको चौथो संस्करण सुरु हुँदैछ। रिडर्स झापाको आयोजनामा काँकरभिट्टा खानेपानी सभाहलमा हुने उत्सव तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। यस्तो छ कार्यक्रमको तालिका शनिबार बिहान १० बजे उद्घाटन कार्यक्रम तय गरिएको कला साहित्य उत्सवमा साढे १० बजेदेखि लोकतन्त्...
कविता : मुन्धुम कवि प्रदिप मेन्याङ्बोका कविता (भिडियोसहित)
कविता : मुन्धुम कवि प्रदिप मेन्याङ्बोका कविता (भिडियोसहित) https://www.youtube.com/watch?v=s8cRqNInZwY&t=25s
कविता : मुर्कुटा। विराट किराँती, झापा (भिडियोसहित)
कविताको टाउको : मुर्कुटा। विराट किराँती, झापा (भिडियोसहित) https://www.youtube.com/watch?v=nkI28G5oNQU
कविता : दिलसरा । विराट किराँती, झापा (भिडियोसहित)
कविताको टाउको : दिलसरा। विराट किराँती, झापा (भिडियोसहित) https://www.youtube.com/watch?v=SxQOEmnQhEw
कविता : हो म अपराधी हुँ । मिननाथ दाहाल (भिडियोसहित)
कविता : म्याङलुङ- वसन्तपुर यात्रामा (भिडियो सहित)
कविता । म्याङलुङ- वसन्तपुर यात्रामा । तेह्रथुम साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहेका कवि दिपक कट्टेलकाे रातो डायरी (कविता संग्रह) प्रकाशित छ । नेपाल लिटरेरी ग्रुप झापा र तेह्रथुम साहित्य प्रतिष्ठानको संयुक्त अायोजनामा भएको कार्यक्रममा कविता बाचन गरिएकाे यो कविता भिडियोमा हेर्नुहोस् । http...
कविता : ‘म बाहुन, तिमी लिम्बु’, कवि दिपक कट्टेल (भिडियो हेर्नुहोस्)
कविता । तिमी लिम्बु, म बाहुन तेह्रथुम साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहेका कवि दिपक कट्टेलकाे रातो डायरी (कविता संग्रह) प्रकाशित छ । नेपाल लिटरेरी ग्रुप झापा र तेह्रथुम साहित्य प्रतिष्ठानको संयुक्त अायोजनामा भएको कार्यक्रममा कविता बाचन गरिएकाे यो कविता भिडियोमा हेर्नुहोस् । htt...
तेह्रथुममा प्रदेशस्तरीय कवि गोष्ठी तथा कविता साँझ
तेह्रथुम । म्याङलुङ बजारमा शुक्रबार साँझ प्रदेशस्तरीय कविता साँझ तथा कवि गोष्ठी भएको छ । नेपाल लिटरेरी ग्रुप र तेह्रथुम साहित्य प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा भएको कविता साँझ तथा कवि गोष्ठीमा तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ र झापाका ३० जना बढी कविहरुले कविता सुनाए । कार्यक्रममा धरानका कवि प्रदीप ...
काठमाडाै‌ । मगर समुदायको कथावस्तुमा आधारित लोक नाटक ‘लिलामे माइलो’ काठमाडौँको थापागाउँमा रहेको कुञ्ज थिएटरमा प्रदर्शन भइरहेको छ । नाटक पुस ७ गतेसम्म दिनहुँ बेलुका ४ः३० बजेदेखि मञ्चन हुने आयोजकले जनाएको छ । नाटकमा ग्रामीण भेगको रहनसन, संस्कृति, पर्व, गाउँले जीवनका घटनालाई उतारिएको निर्माता राजाराम...
काठमाडौं (गुराँस न्युज) । चर्चित गायक गायिका खुमन अधिकारी र गायत्री थापाको स्वर रहेको पन्चेबाजा गीत ‘बोली मिठो’ सार्वजनिक भएको छ । आकर्षक भिडियो सहित गीत शिव दर्शन फिल्मस्को युट्युव मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा बीबी थापाको शब्द तथा महेन्द्र मण्डारीको संगीत रहेको छ । बिबाहको माहोल श्रृज...
म्युजिक भिडियो निर्देशन सहित सांगीतिक क्षेत्रमा छलाङ्ग मार्दै : गायक उर्गेन लामा
काठमाडौँ : गायक उर्गेन डि लामा सांगीतिक क्षेत्रका एक चर्चित गायक हुन् ।लगभग दुइ दशक अघिदेखी साँगीतीक क्षेत्रमा लागेका उर्गेन लामाले दर्जनौ चर्चित गितहरु नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा पस्किसकेका छन् l केहि समयको अन्तराल पछिगायक लामा फेरी आफ्नै गीतको म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन सहित सांगीतिक क्षेत्रमा छलां...
तेह्रथुममा बहुभाषिक कवि गोष्ठी
तेह्रथुम (गुराँस न्युज) । तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका–५, छातेढुंगामा जारी दिपावली मेलाको दोश्रो दिन मंगलबार बहुभाषिक कवि गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहयोगमा सन्चालित गोष्ठीमा तेह्रथुम सहित पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, झापा र काठमाडौँका ५० जना कविले कविता बाचन गरेका छन् । कार्यक...
प्रिय श्रीमान, सायद हुन सक्छ तिमीले पनि मलाई मैले झै प्रिय ठान्छौं। तर, तिमी जत्तिकै समान अहँ कहिल्यै ठानेनौं। अधिकार दिन किन कन्जुस्याई? रथका ती पाङ्ग्राझैं समान हुनुपर्ने होइन र ? खैर छाडिदेऊ, अझै केही बिग्रेको छैन , वर्षौदेखि सुन्दै आएको पति पत्नी रथका दुई पाङ्ग्रा भनाईमा मात्रै सी...
सेलिब्रिटी प्रोफाइल : डिभोर्सपछि फस्टाएकी प्रियंका कार्की
शुक्रबार, कार्तिक ०९, २०७५
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको जन्म विक्रम सम्वत २०४३ साल फाुगन १५ गते काठमाडाैंमा भएको हो । उनको बाल्यकाल पनि काठमाडाैंमै बित्यो । प्रियंकाका बुवा भुपेन्द्र कार्की हुन् । भुपेन्द्र व्यवसायमा संलग्न छन् भने उनकी आमा रक्षा मल्होत्रा एयर होस्टेस हुन् । प्रियंकाका दुई आमा छन् । प्रियंकालाई जन्म दिने आ...
हेप्पी बर्थडे राष्ट्रकविज्यू ! यी हुन् मोटिभेटिभ फ्याक्टर
काठमाडौ‌ं । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले आइतबार सयौं जन्मोत्सव मनाउँदेछन् । यस्ता मानिस विरलै भेटिन्छन् । तर भाग्यमानी घिमिरे शानसंग आफ्नो शताब्दीऔँ जन्मदिन मनाउँदेछन् । उनी मुलुकका सय वर्षका घटनाका साक्षी हुन् । उनी १०० का भए पनि देख्नेहरुले ६५ वर्षभन्दा माथिको भनेर अनुमान गर्न सक्दैनन् । किन ...
‘सानै छु आमा म छोेरी आज पराई घर जाँदिनँ’, ‘जीवन एउटा घामछाँया हो’ । सुन्दा बालगीत जस्तो लाग्ने यी गीतका ओजनदार शब्दहरुले ०६४–६५ सालतिर पूर्वेली संगीत अनुरागीहरुको मनमस्तिष्क जितेको थियो । कृष्णभक्त राईको शब्द, संगीतमा दिवानी चेम्जोङ लिम्बूको स्वर रहेको गीति संग्रह ‘साइन’का यी गीतहरुले त्यो समयका...
इन्जिनियर गायक : जसले बाबु अामाको सपना पुरा गरेर अाफ्नो सपना पुरा गर्दैछन्
बाल्यकालदेखि नै संगीतमा रुचि भएका एकजना संगीतप्रेमी तथा गायकले ४७ वर्षको उमेरमा मात्र गीत रेकर्डि गरेका छन् । यसबीचमा रियाज गर्नसमेत वातावरण नपाएका उनको स्वरमा एउटा अलग अन्दाज छ र यिनको संगीतसँगको नाता हेर्दा वास्तवमै अजीव लाग्छ । ताप्लेजुङको सिनाममा जन्मिएर काठमाडाँँै हँुदै अष्ट्रेलियाको बसाइपछि...
भानुभक्तको ‘देशको राजनीतिक कथा, मेरो व्यथा’ लोकार्पण
तेह्रथुम । तेह्रथुमका लेखक तथा साहित्यकार भानुभक्त सिटौला ‘विद्रोही’को ऐतिहासिक खण्डकाव्य ‘देशको राजनीतिक कथा, मेरो व्यथा’ शुक्रबार एक समारोहका बीच लोकार्पण भएको छ । आठराई गाउँपालिकाको ह्वाकु निवासी कवि तथा लेखक सिटौलाले तेह्रथुम जिल्ला र आठराई क्षेत्रको राजनीतिक इतिहास र दश वर्षे जनयुद्धको समयका घ...
नेपालगन्ज । नायिका रेखा थापाले आफूले पनि बालविवाहकै कारण विभिन्न पीडा सामना गर्नु परेको भन्दै आगामी दिनमा बालविवाह हुन नदिने संकल्प गरेकी छन् । ‘छोरीको निम्ति स्वर्णिम महाअभियान’ भन्ने नारासहित गत वर्षदेखि सुर्खेतबाट सुरु भएको संकल्प सम्मेलनमा छोरीको भविष्य सुनिश्चित गराउन बाँकेमा एक कार्यक्रमबीच...
अभिनेता विपिन कार्कीलाई उनको खास नामबाट धेरैले चिन्दैनन् । फिल्म ‘पशुपतिप्रसाद’को ‘भष्मे डन’ र ‘छड्के’को ‘बिन्दु’ नचिन्ने फिल्मपारखी कमै होलान् । प्रतिभाशाली अभिनेताका रूपमा प्रशंसित विपिनले १० वर्षअघि रंगमञ्चबाट अभिनय थालेका थिए । उनले करिब दुई दर्जन नाटक र आधा दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा काम गरिसकेका...
मरिलानु के छ र?
गाउँमा स्कूल बनाउने भनेर एउटा सप्ताह लागेको थियो । सप्ताहको उद्घाटन गर्न काठमाण्डौँबाट हेलीकप्टर चढेर एकजना मन्त्री आउँदैछन् भनेर भक्तजनहरुको घुँइँचो थियो । के बाल, के बृद्धा हेलीकप्टर हेर्न भनेर पुरै गाउँ इन्द्रको चौरमा उर्लेको थियो । केही छिनमा हेलीकप्टर चढेर मन्त्रीजी आए । आयोजकहरुले फूलको माला ल...
जिन्दगी एक यात्रा हो कहाँबाट शुरु भइ कहाँ पुगेर अन्त हुन्छ कसैलाई थाहा हुन्न जति घुम्ति पार गर्यो उतिनै कठिनाई झेल्नुपर्छ, कति बेला कुन ठाउँमा यात्रा बिहिन हुने हो कस्लाई के थाहा र ? सायद यस्तै होला दैवको लीला । “उफ ! कस्तो थकाई लागेको, पानी पिउन पर्यो “- लौ ! पानी पनि सकिएको रहेछ आधारात भैसक्य...
‘जूनको आगो’ लिएर आए सुविद
काठमाडौं, जेठ २३ । साहित्यकार सुविद गुरागाइँले गजलसंग्रह ‘जूनको आगो’ लिएर आएका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा गजलसंग्रहको लोकार्पण गरियो । नेपाल अफ्रिका समाजले प्रकाशन गरेको यस गजलसंग्रहमा ८३ ओटा गजल रहेका छन् । लेखकको व्यक्तिगत जीवन भोगाइ, प्रेम, बिछोडलगायतका विषयलाई गजलका विषय बनाइ...
‘शरीर देखाएर हिट होइन, स्वरको शक्तिले लोकप्रिय हुन चाहान्छु’ : जुन प्रसार्इ
भनिन्छ, संगीत चाहेर हुदैन, पाएर आएको हुनुपर्छ । संगीत यस्तो क्षेत्र हो जो विद्यालय वा विश्वविद्यायका कक्षाकोठा धाएर मात्रै हुदैन, केही न केही पाएरै आएको हुनुपर्छ । पूर्वको ताप्लेजुङ हाङपाङबाट झापाको विर्तामोड झरेकी गायिका जुन प्रसाईले औपचारिक रुपमा संगीतको ‘क्लास’ लिएकी छैनन् । तर, उनी पूर्वको सां...
काठमाडौं – सामान्यतयाः हिन्दू परम्परामा शुभ कार्यको सुरुवात पञ्चकन्याको हातबाट हुने गर्दछ । तर काठमाडौंमा भएको एउटा कार्यक्रममा पञ्चपुरुषको हातबाट शुभकार्यको सुरुवात भयो । तर एकै पटक होइन, पालैपालो गरी पञ्चपुरुषहरु स्टेजमा उपस्थित भए । ‘रहस्यको गोब्रेकिराले मेरो मगजलाई कुटुकुटु खाइरहेको छ । मेरो खो...